XOG-Madaxweyne Deni oo maanta ku wajahan Itoobiya & qorshihiisa Imaaraadka oo looga yeeray
Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni, oo ay weheliyaan xubno katirsan saraakiisha madaxtooyada iyo saaxiibadiisa siyaasadda ayaa maanta safar ugu baxaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya.
Socdaalka madaxweynaha Puntland ee dalka Itoobiya ayaa la xiriira doorashada Soomaaliya ee 2020/2021, gaar ahaan hardanka madaxda shisheeye ay ku doonayaan cidda ay la doonayaan inay noqoto madaxweynaha Soomaaliya ee doorashooyinka soo socda.
Madaxweynaha Puntland ayaa lafilayaa inuu booqashada Itoobiya kadib uga sii gudbi doono magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta, xilli uu sii xumaanayo xiriirka u dhexeeya shirkadda DP World ee gacanta ku haysa dekedda Boosaaso iyo Puntland.
Dubia ayaa markale u yeertay Madaxweyne Deni oo 14 maalmood kasoo maqan, waxaana arrinkaani xiriir la leeyahay doorashada Soomaaliya iyo xal u helidda xaaladda sii xumaanaysa ee dekedda Boosaaso.
Dani miyuusan xor ahayn Somali na ahayn why dubay hadba ugu yeersysaa muu ushaqeeyo dalkiida iyo dadkiisa mise wakiil buu dubay u yahay waa yaab?????